Isbeddel cusub oo khatar ah oo ka jira Jarmalka: Weerarrada Mindida
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Isbeddel cusub oo khatar ah oo ka jira Jarmalka: Weerarrada Mindida
Jebinta Wararka Yurub • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Ammaanka • Gaadiidka
Halka Maraykanka ama Mexico ay toogashadu dhawaanahan khatar ku tahay dalxiiska, haddana khatartani waa weerarro mindi oo ka dhacay Jarmalka.
Dhowr qof oo rakaab ah oo saarnaa tareenka ICE Intercity ee u dhexeeyay Regensburg iyo Nuremberg ee dalka Jarmalka ayaa ku dhaawacmay weerar mindi ah maanta, saddex ayaa dhaawacoodu culus yahay.
Weerarku waxa uu dhacay wax yar ka hor 9-kii subaxnimo ee subaxnimadii Sabtida isagoo ka dhacay tareenkan casriga ah ee aad u dheereeya.
Muwaadin Suuriyaan ah oo 27 jir ah ayaa u xanaaqay sabab la'aan. Wuxuu weeraray rakaab ku sugnaa qolkiisa.
Tareenku waxa uu joogsi degdeg ah ku sameeyay saldhiga tareenka ee xigay, booliiskuna waxa u suurtagashay in ay qabtaan ninka weerarka gaystay, dadkii ugu horeeyayna waxa ay rakaab dhaawac ah ula carareen cusbitaal u dhow.
Bilayska Federaalka Jarmalka ee mas'uulka ka ah badbaadada tareenada korkiisa ma awoodo inay faallo ka bixiyaan wakhtigan.
Dalka Jarmalka waxaa ka socda weerarro mindi loo adeegsaday oo qaarkood ay ku dhinteen.
Weerarkii maanta ayaa sabab u noqday in qaar badan oo ka mid ah Jarmalka ay fariimo cadaawad ah oo ku wajahan qaxootiga dalkaasi ku soo qoraan Twitter, telegram, iyo baraha kale ee bulshada, ama kooxaha lagu sheekeysto.
Todobaad ka hor ayaa weerar ka dhacay magaalada Old ee Dusseldorf, oo ah xarunta madadaalada iyo nolosha cawayska, waxa uu ahaa weerarkii labaad muddo 2 toddobaad gudahood ah.
Qofna lama dilin, laakiin 2 17 jir ah ayaa nasiib u yeeshay in laba dhakhtar ay ka hortageen dhiigbax dilaa ah.
Ka dib maanta dhacdo, tareenada fogfog ayaa dib loo celiyay taasoo keentay dib u dhac ilaa 1 saac ah.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Horst Seehofer ayaa aad uga naxay waxaana uu sheegay in uu u rajeeyay dadkii ku dhaawacmay weerarkaas iyo kuwii goob-joogga u ahaa in ay dhaqso u bogsadaan.
Waxa uu u mahadceliyey waaxda booliska tallaabada degdegga ah ee badbaadada leh ee lagaga hortagayo dhaawac ama dhimasho kale.